မိသားစု တစ်စုကို ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ – စွယ်စုံသုတ
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီး လုပ်တဲ့သူ တစ်နည်း အားဖြင့် အဖေကို အဓိကထားစေချင်တာပါ။ အိမ်ထောင်ဦးစီးညံ့ဖျင်းရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာပဲ၊ အိမ်ထောင်ဦးစီအနေနဲ့မိန်းမယူ၊ ကလေးမွေးရုံ လောက်နဲ့တော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးမခေါ်ထိုက်သေးပါဘူး။
မိသားစုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်းပေးရမယ့် တာဝန်တွေ ရှိသလို၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း ဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုတွေရှိမှာပဲ၊ ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုဆက်လျှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေး အမြင်တွေလည်းရှိသင့် ရှိထိုက်ပါတယ်။ မိသားစုအရေးတွေကို လည်းရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ရှေ့က ဦးဆောင်မှုတွေလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။
ကဲအဲ့လိုမှမဟု တ်ပဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ စားလောက်ရုံလေး လုပ်မယ်၊ အိမ်ပြန် ထမင်းစား၊ အိပ်၊ထ၊စား၊သွား ဆိုယုံလောက်ပဲ လုပ်နေရင်တော့ ဒီအိမ်ဟာ သေချာတယ် ဆင်းရဲတွင်းထဲရောက်ပြီး ဒုက္ခတွေ တန်းစီပြီး ဝင်နေမှာပဲဒါ့ကြောင့် ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲနေမှာပဲ..။
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးတယ်အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်တွင်းသူခိုးရှိနေရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာ ပဲ အိမ်ထောင်ဆိုတာ လင်နဲ့မယား နှစ်ဦး တည်ဆောက် ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခု ကယောက်ျားဖြစ်စေ၊ ဇနီးမယားဖြစ်စေတစ်ယောက်ယောက်ကအိမ်တွင်းသူခိုး ဖြစ်နေရင်သေချာတယ်ဆင်းရဲပြီဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။
ကိုယ့်အိမ်မှာဖြင့်စားမလောက်သေးဘူး၊ကိုယ့်အမျိုးဆီ ကိုခိုးခိုးပေးနေတာ မိသားစုရှေ့ရေးကို သိပ်မတွေးဘူး။ ထင်တိုင်းကျဲနေတာမျိုး ထမင်းမငတ်ရုံတမယ်ပဲ ရပ်တည်နေသ၍တော့ အဲ့ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာပဲ. နောက်တစ်နည်းက အရက်သောက်တတ်တဲ့ယောက်ျား ကလည်းခိုးမှာပဲ၊ ချဲတွေ နှစ်လုံးတွေထိုးတတ်တဲ့မိန်းမ ကလည်း ခိုးမှာ။အဲဒါဆိုသေချာတယ် ဒီအိမ်ထောင်စု ဟာ ဆင်းရဲ နေမှာပဲ။
လူဆိုတာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနေတတ်မှ လူနဲ့ တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ လူဖြစ်တယ် ဆိုရုံပဲ သုံးလို့ရ ပါတယ်။ လူလို့ မခေါ် ထိုက်လောက်ပါဘူး။ အဓိကပြောချင်တာက ကိုယ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေစေချင်တာပါ။
အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ သူနဲ့ငါ့အကြောင်းပြော၊ ငါနဲ့တွေ့ရင်သူ့အကြောင်းပြော လောကကြီးကိုအကောင်းမမြင်တတ်ဘူး ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးတွေရှိနေသ၍တော့ ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေနိုင် မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့လိုလူမျိုးကို ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ် ကမှ လည်း ဖေးမစောင့်ရှောက်နေမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဆင်းရဲနေမှာပဲ ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ခရီး ဆက်နိုင်နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအိမ်ဟာလည်း ဆင်းရဲနေမှာပဲ။
ကျနော်ပြောတဲ့ဒီအချက်တွေတစ်ချက်ချက်နဲ့ငြိနေတယ် ဆိုရင် ဒီမိသားစုရဲ့အနာဂတ်ဟာ လှပနေမှာ မဟုတ်နိုင် တဲ့အတွက်စာ ဖတ်ပရိတ်သတ်တွေလည်းဒီအချက်လေးတွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။
မိသားစုအရေးတွေကို လည်းရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ရှေ့က ဦးဆောင်မှုတွေလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။ ကဲအဲ့လိုမှမဟု တ်ပဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ စားလောက်ရုံလေး လုပ်မယ်၊ အိမ်ပြန် ထမင်းစား၊ အိပ်၊ထ၊စား၊သွား ဆိုယုံလောက်ပဲ လုပ်နေရင်တော့ ဒီအိမ်ဟာ သေချာတယ် ဆင်းရဲတွင်းထဲရောက်ပြီး ဒုက္ခတွေ တန်းစီပြီး ဝင်နေမှာပဲဒါ့ကြောင့် ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲနေမှာပဲ..။
ကိုယ့်အိမ်မှာဖြင့်စားမလောက်သေးဘူး၊ကိုယ့်အမျိုးဆီ ကိုခိုးခိုးပေးနေတာ မိသားစုရှေ့ရေးကို သိပ်မတွေးဘူး။ ထင်တိုင်းကျဲနေတာမျိုး ထမင်းမငတ်ရုံတမယ်ပဲ ရပ်တည်နေသ၍တော့ အဲ့ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာပဲ. နောက်တစ်နည်းက အရက်သောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားကလည်းခိုးမှာပဲ၊ ချဲတွေ နှစ်လုံးတွေထိုးတတ်တဲ့မိန်းမကလည်း ခိုးမှာ။အဲဒါဆိုသေချာတယ် ဒီအိမ်ထောင်စုဟာ ဆင်းရဲ နေမှာပဲ။